We She Me: Australia Vs Singapore
| FLAGS: Australia , Singapore
Anonymous - 7/10/08, 3:03 PM
မဇနိ - 7/10/08, 4:10 PM
ဗဟုသုတအဖြစ် ဖတ်မှတ်သွားပါတယ်။ သေချာရေးပြတာ ကျေးဇူးပါဗျာ။
ရက်ရာဇာ - 7/10/08, 4:32 PM
Ko Boyz - 7/10/08, 4:42 PM
အဖိုးတန်တဲ့ အချက်အလက်တွေပါ...။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
ကိုပေါက်ကျိုင်း - 7/10/08, 5:32 PM
Anonymous - 7/10/08, 6:48 PM
Kyay Zu par Mr.WeSheMe.Mhat thar thwar par tel. Naut lal htet Read par oo mel.
Htoo Tay Zar - 7/10/08, 7:16 PM
ကျေးဇူးပါ အကို အန်ဒီ ဗဟုသုတ ရပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဘယ်သွားရမှန်း ခုထိမသိသေးဘူး။ ကျွန်တော် အခုပို့စ် reader မှာ share ထားလိုက်တယ် ကျေးဇူးအကို
ဝေတိုး - 7/11/08, 12:17 AM
ရုံးကဘိုတွေကနယူးယောက်က အလုပ်ခွင်မှာ aggressiveအဖြစ်ဆုံးတဲ့။စင်္ကာပူကပြောင်းလာတဲ့ကျမတို့အတွက်ကသက်တောင့်သက်သာပဲ။ California ကပြောင်းလာတဲ့ ကိုရီးယား သူငယ်ချင်းကတော့ နယူးယောက်က aggressive ဖြစ်လွန်းတယ်တဲ့။ ဒီပို့စ်အတွက်ကျေးဇူး။ နောက် အား ရင် အဲဒီက retirement policyအကြောင်းလေးရေးဖို့တေင်းဆိုပါရစေ။
တားမြစ် ထားသော... - 7/11/08, 12:18 AM
စိတ်ဝင်စားစရာတွေပါပဲ။ လေ့လာနေသူတွေအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ သတင်းတွေပေါ့။
တောင်ငူသား - 7/11/08, 12:22 AM
မှောင်တိမှောင်မွှားထဲက အလင်းတစ်ပြပါပဲ အကိုအန်ဒီရေ
Anonymous - 7/11/08, 1:01 AM
In your other post , within there office there arealot of politics. May i know within the limit? Worse than sg?
Sai Tun - 7/11/08, 1:40 AM
ဝေမျှ ပေးတာ ကျေးဇူးနော်
War War - 7/15/08, 10:46 PM
Kyay zue pe` ko andy yae.. thi chin tar lay tway thi lite ya lo :)
မြမြမိုး - 7/16/08, 5:49 PM
အမြဲဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်မန့် မချန်ဖြစ်တာပါ။ ဒီပို့စ်လေး က တော်တော် ဗဟုသုတ ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ပရင့်ထုတ်ပြီး ပေးချင်ပါတယ်။ ခွင့်ပြုပါနော်။
နောက်ပြီး သြဇီမှာ အိုင်တီအလုပ် ဈေးကွက်ဘယ်လိုရှိလဲ၊ဘာတွေလေ့လာ ပြင်ဆင်ထားသင့်လဲ၊ဘယ်လိုင်း(ဒေါ့နက် ၊ဂျာဗား) တွေက အလုပ်ပိုကောင်းတယ် စတဲ့ အလုပ်ခွင် ကိစွ သိမှတ်ဖွယ်လေးတွေလည်း ရေးပေးပါဦးနော်။
Pan Nwe - 7/18/08, 7:10 AM
ကိုအန်ဒီတို့ဆီက ကျမတို့ဆီနဲ့ တစ်ချို့ဟာတွေ တော်တော်တူပါတယ်။ အခမဲ့ဗိုက်ကြီးတာတို့ ဘာတို့ရောပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒီဘက်မှာတော့ အတော်အေးတယ်။
Andy Myint - 7/20/08, 5:45 PM
အားလုံးပဲ Welcome ပါ။
New Yorker တွေအကြောင်းလည်း ရေးပါဦး မဝေတိုး။ Retirement planning အကြောင်းကတော့ အလျဉ်းသင့်ရင် ရေးသွားမှာပါ။ ကျွန်တော်လည်း ရေရေရာရာတော့ မသိသေးဘူး။
အလုပ်အကြောင်း ကြုံရင် ရေးသွားပါမယ် မမြမြမိုး။
အဲဒီကို လာဖို့ စဉ်းစားသေးတယ် မပန်းနွယ်။ ရာသီဥတု အရမ်း အေးတာနဲ့။
Anonymous - 7/30/08, 1:00 AM
for me i think ausi is living like as more enjoyable and comfortable than sg. More meaningful than sg. I think only should be problem is colours. How do you think?
Anonymous - 7/30/08, 12:48 PM
Restaurants and clubs open till 9:30pm or 10pm. And in the cities, many shops open till9or 10pm. People here normally work till 5:30 or 6pm and do not work as late as in Asian countries. That is one of the main reasons why many businesses close.
Andy Myint - 7/30/08, 1:31 PM
Dear Reader(1), that depends on individual i reckon. Racism is not that bad here.
Thanks for your comment Reader (from AU?). I will put it in my post.
wwk - 7/31/08, 1:05 AM
Thanks for your information. i am planning to go to AU. thanks Ko Andy
တန်ခူး - 7/31/08, 2:40 PM
ဗဟုသုတဖြစ်ပြီး လက်တွေ့အသုံးဝင်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်ဇယားလေး အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုအန်ဒီ…
Andy Myint - 7/31/08, 9:02 PM
ံHope it's useful for you WWK. See you soon.
အသုံးဝင်တယ်ဆိုလို့ ရေးရတာ တန်တာပေါ့ မတန်ခူး။
JulyDream - 8/3/08, 7:36 PM
နှိုင်းယှဉ် ဖော်ပြချက်တွေအတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။ လက်ရှိ စကာင်္ပူ ရောက်တာတောင် ၁ နှစ်ကျော်ပဲ ရှိသေးတော့ လူရည် မလည်သေးပါဘူး။ အခုလို နှိုင်းယှဉ်ပြတာမျိုးကို ဖတ်မိတော့မှ ဒါမျိုးတွေ ရှိပါလား ဆိုတာကို သိရတဲ့သူပါ။ ဒီက MRT နဲ့ Bus ကတော့ အတော် အဆင်ပြေပါတယ်။ သြဇီမှာတော့ မြေကျယ်တော့ ကိုယ်ပိုင်ကား ရှိမှ အဆင်ပြေမယ့် ပုံပဲ။
MELODYMAUNG - 8/4/08, 2:25 PM
ဖတ်မှတ်သွားခွင့်ရလို့ သိုင်းခရုဗျာ နောက် update တင်မှာတွေလဲ စောင့်ဖတ်ပါမယ်
ကျော်မင်းနိုင် - 8/25/08, 2:42 AM
သြစတြေးလျ နဲ့ စင်္ကာပူ နဲ့ ဘေး မှာ မြန်မာ ဆိုတဲ့
ကော်လံလေး ပါ တိုးလိုက်ရင် အရမ်း ကို ပြည့် စုံတဲ့
ပို့စ် လေး ဖြစ်သွားမှာပဲ ဗျာ.....(အချွန်နဲ့ မသွားတယ်ဗျို့..ဟဲဟဲ)
Soe - 9/18/08, 11:50 AM
တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ် လေးဗျာ..
Andy Myint - 9/18/08, 8:52 PM
Thanks, Soe, Melody Maung, JulyDream & Kyaw Min Naing... :)
Dr. Nyan - 10/17/08, 7:07 PM
sunny - 3/27/09, 6:20 AM
thanks for ur information..I appreciate that..
Evy - 7/30/10, 12:58 PM
သေချာ compare လုပ်ြပထားလို့ကျေးဇူးပါ ကို Andy.
Thwe Thwe - 1/27/12, 12:47 AM